कुरा भित्री यात्राको « प्रशासन
कुरा भित्री यात्राको
यात्रा भन्ने बित्तिकै जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप नै होला, त्यति नभएपनि चीन, दुबई, सिंगापुर वा भारतको गोवा, मुम्बई होला भन्ने जोकोहीको मानसपटलमा आउने गर्दछ । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको यात्रा भनेको घर बाहिर वा देशबाहिरको यात्रा नभएर आफूभित्र वा अन्तर्मनको यात्राको हो, चिन्तनको हो अनि सन्त विचारकहरूको भनाई, जीवनी र मार्गदर्शनको चित्रण हो । झन्डै १ महिना लगाएर अध्ययन गरिएका मौन उत्सव (रवीशंकर) र जितै जित (गोविन्द टण्डन) नामक दुई पुस्तकबाट प्राप्त आध्यात्मिक जानकारीलाई आफ्नो बुझाइमा अन्तरघुलन गर्दा आएको परिणामबाहेक यो लेख अरू थप केही होइन ।
जति ज्ञानी भयो त्यति स्वतन्त्र हुने सम्भावना हुन्छ किनकि संस्कृत भाषामा ‘स्व’ को अर्थ आफू र ‘तन्त्र’ को अर्थ व्यवस्थित पार्नु हुन्छ। तर ज्ञान प्राप्ति सैद्धान्तिक मात्र छ कि व्यवहारमा वा जीवन र जगतमा उतार्न मिल्ने र सक्ने हो वा हैन त्यसको विशेष अर्थ हुन्छ । नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्ति हुनु भनेको आफू र समाजलाई उज्यालोतर्फ लैजानु हो । अन्धकारलाई सराप्नु भन्दा मैन बत्ती बाल्नु राम्रो हो भन्ने जापनिज भनाई रहेको छ भने अप्प दिपो भव: भनेर संस्कृत साहित्यमा उल्लेख छ ।
विद्या भनेको ज्ञान हो, विद्या भनेको वेदलगायतका शास्त्रबाट प्राप्त हुने ज्ञान रस हो, विद्या भनेको अध्यात्मवाद पनि हो । अव के लाई विद्या भनेर निर्क्यौल गर्ने ? गुरु कसलाई मान्ने अनि ज्ञानशाला हुनका लागि के के पूर्वशर्त हुन सक्ला ? विचार मन्थन आवश्यक छ ।
जीवनमा सुख प्राप्तिका दुई मार्ग भनेका अध्यात्म र भौतिक मार्ग हुन् । यी दुवै आफैमा अपुरा छन् तर उचित संयोजन हुँदा मात्र जीवन सार्थक बन्दछ अनि सन्तुलित हुन्छ । उसो भए हामीले के कति हिस्सा भौतिक मार्गको र के कति भाग अध्यात्मतर्फको समेटेका छौँ भनेर हिसाबकिताब गर्नै पर्दछ । जे होस् हामीहरू आफ्नो शरीरभित्र रहने चित्त वा आत्माको अनुभूति गरेका छौँ कि छैनौँ ? वा सो का लागि चासो राखेका पो छैनौँ कि !
मानिसको जीवनमा कति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने र कति अनुशासन कायम हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा उचित सन्तुलन अपेक्षित हुन्छ । सही कुरामा र मात्रामा अनुशासनसहितको ज्यादा स्वतन्त्रता भए मात्र काम राम्रो बन्ने देखिन्छ । लगानीको कुरामा होस् वा कामको लागि स्वायत्तताको कुरामा किन नहोस् स्वतन्त्रताको अंश बढी हुनुपर्दछ भने कानुन वा मापदण्डको माध्यमबाट निश्चित अनुशासनको घेरा तयार हुनुपर्दछ । यसलाई थप प्रस्ट पार्नका लागि अनुशासन र स्वतन्त्रता भनेको जमिन कति राख्ने र कति पर्खाल वा गेट लगाउने भनेजस्तै हो । अवश्य पनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा प्रयोगका लागि केही मात्र क्षेत्र कम्पाउन्ड वालले लिन्छ भने मुख्यगरी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने हो सो मा लगाइएको हुन्छ ।
भनिन्छ कि मन चंगा त लोटामा गङ्गा । हुन पनि हो दिमागसँगै मन वा चित्त पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ हामीलाई खुसी राख्नका लागि । यति मात्र हैन हाम्रो आत्मा पनि हलुका हुनु जरुरी छ । अर्को के पनि भनिएको छ भने मनमा सहजता, हृदयमा प्रेम र कर्ममा पवित्रता हुनुपर्दछ । आफ्नो मन र चित्त के कस्तो छ ? सन्तुलित छ कि छैन ? भड्केको छ कि छैन ? सो कुराको निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने प्रथम कर्ता हामी आफै हौँ अरू कोही आइदिएर जादु गर्ने वाला छैन ।
भनिन्छ कि वास्तविक प्रेममा निर्जीव वस्तुहरू पनि जीवित जस्तै बन्दछन् । ढुङ्गा र रुखहरूले समेत हामीसँग सम्वाद गर्दछन् । मात्र जरुरी छ प्रेमको शाश्वत चिन्तन र अभ्यास । यदि हामीहरू निष्काम भएर खुला हृदयले चिन्तन गर्‍यौँ भने कुनै चिज अप्रिय लाग्दैन । कुनै चिज खराब लाग्दैन । मात्र कर्ताको रूपमा कसैले गरेको व्यवहार खराब लाग्न सक्छ । नमिलेको लाग्न सक्छ ।
यो संसारमा काम गर्दा गल्ती वा त्रुटि नै हुँदैन भन्ने छैन । तथापि गल्तीबाट सिक्ने र पुन: उही गल्ती नदोहोर्याउनु नै बुद्धिमानी हो । भनिएको छ कि मृत्युको भयले जीवन रक्षा गर्छ भने गल्तीको भयले सही कार्य गराउँदछ । व्यक्तिमा जिद्दिभाव हैन, स्वीकार्यभाव आवश्यक पर्दछ । गल्तीको सफाइ दिनका लागि समय खर्च गर्नुको सट्टा केवल स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
जीवन समग्रमा एक युद्ध हो । व्यक्ति जीवनमा अरूसँग मात्र हैन आफैसँग पनि ठुलो युद्ध लडिरहेको हुन्छ । जस्तो कि डाक्टरहरू रोग विरुद्ध लड्छन्, वकिलहरू अन्याय विरुद्ध र शिक्षकहरू अज्ञानता विरुद्ध । आ-आफ्नो क्षेत्रअनुसार लडाइ लड्दा मात्रै उपलब्धि भएको महसुस हुन्छ, यदि लड्ने इच्छा त्याग्यौँ भने निराशा छाउँछ । तसर्थ अर्थपूर्ण युद्धका लडाकु बन्नुपर्दछ र विजय हासिल गर्नुपर्दछ ।
व्यक्ति आफूले देखेको बुझेको जानेको कुरा कत्तिको प्रयोग गर्दछ अनि कत्तिको होस पूर्वक कर्म गर्दछ, यसको विशेष महत्त्व रहने गर्दछ । अनुभवले देखाएको छ कि ज्ञान वा सजगताले दुखलाई आत्मातर्फ बढाउँछ । ज्ञान नहुँदा त्यही दुख धेरै गुणा विस्तार हुन्छ र कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । यसका साथै तप, वैराग्य र शरणागतिले हाम्रो मनलाई शुद्ध गर्छ र आनन्दित बनाउँछ ।
मन मिल्ने वा साच्चिकै साथी हुनका लागि नजिक रहिरहने गुणहरू आवश्यक पर्दछन् । घनिष्ठता छुटाउने केही कारणहरू भनेका हठ वा अहङ्कार, आकाङ्क्षा वा चाहना, असंवेदनशिलता, मूल्याङ्कनयुक्त धारणा, घनिष्ठतालाई महत्त्व नदिनु, आफूमा वा अरूमा अपूर्णता देख्नु, असन्तुष्टि वा कृतज्ञताको अभाव र विवेक एवं वैराग्यको अभावले नजिक भएका नाता सम्बन्ध र व्यक्तिहरू पनि क्रमशः टाढिन पुग्दछन् । संयोजन भन्दा पनि वियोजन वा विखण्डन गर्ने क्रियाकलापले सम्बन्धलाई बनाउने नभै बिगार्दछन् । व्यक्तिको एउटा राम्रो काम वा एउटा नराम्रो कामकै भरमा समग्र मूल्याङ्कन गरी धारणा बनाउनु गलत हुन्छ । असल पक्षको वढावा गर्नका लागि समेत गलत पक्षको पहिचान र चिरफार आवश्यक छ ।
प्रेम तीन प्रकारको हुन्छ : आकर्षणले पैदा हुने, सुविधाको कारणले उत्पन्न हुने र दिव्यताप्रति जागृत हुने । तर के हामी साँचो प्रेम अर्थात् दिव्यताप्रति जागृत भएको प्रेम गरिरहेका छौँ त ? यो नै अहम प्रश्न हो । अर्कोतर्फ हामीले के कस्तो चाहना राख्दछौँ हामी त्यस्तै बन्न पुग्दछौँ । भनिएको छ कि आरामको चाहनाले अल्छी, पूर्णताको चाहनाले क्रोधित र धनी हुने चाहनाले लोभी बनाउँदछ । आदर्श जीवन कस्तो हुनुपर्दछ त भनेर गुरुहरूलाई प्रश्न गर्दा कामनारहित सेवा बुद्धिरहित ज्ञान निष्काम प्रेम काल र घटनाभन्दा परको जीवन नै तिमी हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ ।
उच्च सजगताका लागि प्राण शक्ति आवश्यक छ । प्राण शक्ति बढाउने उपायहरू भनेको उपवास बस्ने चिसो पानीले स्नान गर्ने पूर्ण विश्राम गर्ने किर्तन वा जप गर्ने प्राणायाम क्रिया र ध्यान गर्ने दाताभावरहित दान र कर्ताभावरहित सेवा गुरुको सानिध्यता र मौन हुन् । यी सबैको समष्टि भनेकै यज्ञ हो ।
हामीहरू यो संसारलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि निरन्तरको साधना गर्न जरुरी छ । साधना सफल हुनका लागि मानवमात्रको ह्रदयभाव असल हुन जरुरी छ । असल साधकका ६ लक्षण हुने भनिएको छ : कम जान्दछु वा जान्नुपर्ने कुरा धेरै छ भनेर मान्नु । केही सिक्ने चाहना । अनिर्णयात्मक भाव र खुला मन । आफ्नो पथप्रति पूर्ण श्रद्धा । सत्य र सेवालाई सदैव सुखलाईभन्दा प्राथमिकता दिनु । धैर्यपूर्वकको प्रयत्नशिलता ।
शिक्षाका पाँच पक्षहरू जानकारी, धारणा, प्रवृत्ति, कल्पना र स्वतन्त्रताको समुचित प्रयोग भएमा मात्र जीवनमा शिक्षाको सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यदि कुनै लेभलको ज्ञान प्राप्त गरेपछि कुनै व्यक्तिले आफूलाई विशेष हुँ भन्ने भाव दिन्छ भने जीवनमा समाहित हुँदैन भने जीवनमा आनन्द ल्याउँदैन भने र मुक्त गर्दैन भने ज्ञान फगत बोझ हो । ज्ञानलाई बोझपूर्ण बनाउने कि नबनाउने भन्ने छनौट हामीले गर्नुपर्दछ, आफ्नै मनलाई सोधेर गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो मन विभिन्न परिस्थिति र अभ्यासको दास हो । मनलाई प्रभावित पार्ने ५ तत्त्वहरू : स्थान, समय, आहार, पूर्व संस्कार तथा संगति र कार्यहरू । यी तत्त्वहरूको संयोजन जहाँसम्म असल र उचित कायम गर्न सकिन्छ त्यति हदसम्म मात्र हाम्रो मन असल स्थानमा बस्दछ ।
जीवनलाई उर्जावान बनाउने भनेको हामीमा उत्पन्न हुने भावना र कामप्रतिको सक्रियताको उचित संयोजनको विषय हो । हामीमा जागृत हुने इच्छा, कार्य र सजगता मध्ये एक समयमा कुनै एउटा चीज प्रबल रहन्छ । इच्छाहरूको सूचि लामो बनाइयो भने प्राप्ति कम हुन्छ जसले नैराश्यता ल्याउन सक्छ । तसर्थ कम अपेक्षा र बढी प्राप्तिबाट खुसी रहने बाटो अपनाउनुपर्दछ । इश्वरमात्रको अनुभूति ल्याउनु र उनीमा भएका गुण अरूमा अनुभूत गर्नु जरुरी छ । भनिएको छ कि स्वयंमा ईश्वरलाई देख्नु ध्यान हो, अरूमा ईश्वरलाई देख्नु प्रेम हो र सर्वत्र ईश्वरलाई देख्नु ज्ञान हो । प्रेमको अभिव्यक्ति सेवा हो, आनन्दको अभिव्यक्ति मुस्कान हो, शान्तिको अभिव्यक्ति ध्यान हो, ईश्वरको अभिव्यक्ति सचेत कार्य हो । सचेत कार्यका लागि हाम्रो हरेक कार्य होसपूर्वक हुनुपर्दछ र अन्तर्मनलाई सोधेर मात्र गरिनुपर्दछ अर्थात् बाह्य मात्र हैन आन्तरिक यात्रा समेत आवश्यक पर्दछ ।
आध्यात्मिक ज्ञान आर्जन नगरी व्यक्ति शान्त र धैर्यवान् रहन असंभवप्राय छ । आध्यात्मिक पथ भनेको सेवा, साधना र समर्पणको पथ हो । जब अरूलाई दिनमा व्यक्ति खुसी हुन थाल्दछ तब उसले आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर अरूको खाँचो पूरा गर्ने साधनामा तल्लीन हुन्छ । खुसीको स्रोत आफूभित्रै भेटिन्छ न कि बजारमा वा कथित स्वर्गमा । हामी मौन हुन र मनलाई अध्ययन गर्न सक्नुपर्दछ । भनिएको छ कि तिम्रो आत्मा मौनको सघन अवस्था हो । यही सघन मौन नै साँचो विवेक र ज्ञान हो । विवेकयुक्त ज्ञान साधनाबाट प्राप्त हुन्छ र यस्तो ज्ञान जुन कुनै कानुन र विधिभन्दा उच्च हुन्छ ।
कडा मिहेनतभन्दा पनि बुद्धिमत्तापूर्वक मिहेनत भन्ने नयाँ मान्यतालाई वास्तविक जीवनमा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यति मात्र हैन व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनका आवश्यकताहरूबिच सन्तुलन कायम गर्न समेत अभ्यासको खाँचो पर्दछ । जीवन जिउने कला अर्थात् आर्ट अफ लिभिङले यी विषयहरूलाई सम्भव तुल्याइदिन्छ । क्षमाशिलता, जागरुकता, आत्मीयता, सामूहिक जिम्मेवारी नेतृत्वककलाको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, जुन कुरा यो मार्गले पूरा गर्ने देखिन्छ । यस्तो कलाको विकासका लागि पनि व्यक्तिको आन्तरिक पक्ष वा चित्त वा ह्रदयको कुरा अध्ययन गर्ने सीप वा कौशल पनि आवश्यक पर्दछ ।
योगाभ्यासमा सुदर्शन क्रियाको विशेष महत्त्व रहने गर्दछ । सुदर्शन क्रियाले मन र शरीरलाई एउटै लयमा आबद्ध गरिदिन्छ । स्वास्थ्य सुधार, आनन्द, एकाग्रता, उत्साह तथा सुमधुर सम्बन्ध विकास आदि सुदर्शन क्रियाबाट हुने परिणामहरू हुन् । भित्री यात्रालाई सफल तुल्याउनका लागि शारीरिक अवस्था स्वस्थ र मानसिक अवस्था सन्तुलित हुनु जरुरी छ । प्रमुख कुरा त अरूलाई हेर्ने वा व्यवहार गर्ने कला विकासको लागि सर्वप्रथम आफू नै जीवन र जगत् तथा आफ्नो उपस्थिति सम्बन्धमा भित्रैदेखि प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
Tags : नेत्र सुवेदी 'प्रयास' यात्रा